Imveliso Yekati | Isilimela 2022
Inguquko kweekati- isishwankathelo esipheleleyo
Udidi Imveliso Yekati
Ukuba ikati yakho inee-parasites, i-Revolution inokuba yimpendulo. Fumanisa ukuba zeziphi izitshabalalisi zemveliso ezikhuselayo kunye neziphumo ebezingalindelekanga ekufuneka wazi ngazo.
Ukuba uza kuyilungisa ngokwakho ikati yasePersi, yenze ngokufanelekileyo. Khangela ukuba yeyiphi i-trimmer kunye ne-blade efanelekileyo kwaye ufumane iingcebiso eziza kwenza umsebenzi onzima ube lula.
I-5 Homemade Cat Litter Substitute
Ngaba udiniwe yinkcitho yenkunkuma yekati yorhwebo? Jonga olu luhlu lweelitha ezintlanu ozenzayo onokuzenza kwizinto ezilula osenokuba unazo endlwini.
Iresiphi elula yeCat Repellent
Akunyanzelekanga ukuba uyinyamezele ikati yakho engena apho ungamfuniyo. Fumana iresiphi yokhuseleko ekhuselekileyo, yendalo kunye nokufunda ukuba zeziphi izithako onokuthi uziphephe.
Uyifaka njani iCango loMnyango
Iikati ziyakuthanda ukuba nenkululeko yokuza zize ziphume endlwini ngendlela ezithanda ngayo, kwaye ungafaka ucango lekati ukwenza oku kube lula kuwe nakwisilwanyana sakho sasekhaya. ...
Sebenzisa ikati yokubopha
Ukubopha kungagcina ikati yakho ikhuseleke ngakumbi kunaleyisi nje. Fumanisa ukuba iihanti ezahlukeneyo zisebenza njani, kwaye ufumane iingcebiso zokunceda isilwanyana sakho samkele ukunxiba esinye.
Yintoni eyenziwa yiCatnip kwiikati? Iziphumo, ukusetyenziswa, kunye noKhuseleko
Ukuba i-kitty yakho iya endle kwi-catnip, unokucinga ukuba iyamphakamisa okanye iphambane kancinci! ICatnip ikhuseleke ngokugqibeleleyo kwiikati kwaye inokuba yinto entle ...
Uyisebenzisa kanjani iPilisi yeMipu kwiKati
Akukho sidingo sokoyika ukunika ikati yakho amayeza akhe. Sebenzisa le miyalelo inyathelo nenyathelo ngokusebenzisa umpu wepilisi ukunceda uKitty athathe amayeza akhe.
Iibhokisi zeLitter zeLitter ezi-6 ziBalaseleyo, ngokukaBanini beekati
Uninzi lwabazali bezilwanyana bakhetha ibhokisi yenkunkuma yokuzicoca ngaphezulu kwendlu yangasese yekati. Abathandi bekati bonwabela iibhokisi zenkunkuma ezenzekelayo kuba ngamanye amaxesha irobhothi ...
Iinkqubo zokuLanda iiNdawo zeGPS zeekati
I-GPS tracker inokuba yeyona ndlela inokuthenjwa ekufumaneni ikati elahlekileyo. Jonga oku kujongwa ngokubanzi kweenkqubo ezahlukeneyo kwaye wenze ukhetho olusebenzayo kwisilwanyana sakho sasekhaya.
Iikati zezilwanyana ezixhonyiweyo eziThengayo
Akukho nto inokuthi ithathe indawo yekati yokwenyani, kodwa isilwanyana esifakiwe sinokonwaba-ngakumbi ukuba siyacoca. Jonga okukhoyo, kwaye uthelekise amaxabiso kunye nokuhlelwa.
Isikhokelo ekuthengeni iibhedi zeekati ezifudumeleyo
Yonke ikati ifanelwe yindawo efudumeleyo yokuphumla. Nxibelelana nesi sikhokelo siphathekayo sichaza iibhedi ezishushu zokusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle kwaye wenze ukhetho olululo lwesilwanyana sakho sasekhaya.
Iinketho Cat Wall Iishelufa kunye neeperile
Ngelixa abanini beekati banikezela iikati zabo ngemithi yekati, indlela entsha kukufaka iishelufa zodonga lweekati kunye neepherches kwiindonga zakho ukwenza ukutyeba ...
fumana amakhuphoni asimahla ngeposi
amazwe athetha isiFrentshi kwii-caribbean
umane endijonga ukude
ungabaleka izihlangu zoqeqesho
ziibhili ezi- $ 2 ezixabisa nantoni na